world knowledge Archives - Page 52 of 58 - Thutazone
သင်မမြင်ဖူးလောက်သေးတဲ့ ကမ္ဘာကျော် တိုက်တန်းနစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပုံရိပ်များ
တိုင်တန်းနစ် သင်္ဘော ခေါ် RMS Titanic မှာ ဗြိတိသျှ သင်္ဘော ဖြစ်ပြီး ကြယ်ဖြူလိုင်း သင်္ဘောလိုင်း အတွက် ဟာလန်းနှင့် ဝုဖ် သင်္ဘော ဆောက်လုပ်ရေးက ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကြယ်ဖြူလိုင်းတွင် ရှယ်ယာအများဆုံးထည့်ဝင်ခဲ့သူမှာ ...
(ကျောက်ခေတ်အကြောင်း သိချင်နေသူများအတွက် ရှာဖွေဝေမျှလိုက်ပါတယ်) ကျောက်ခေတ် ကျောက်ခေတ် ဆိုသည်မှာ ရှည်လျားသော သမိုင်းမတင်မီကာလတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူသားတို့သည် လက်နက်ကိရိယာ တန်ဆာပလာများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ကျောက်ဆိုင်ကျောက်ခဲများ ကို အဓိကထား၍ အသုံးချသော အချိန်ကာလကိုခေါ်သည်။ ထိုခေတ်ထိုအခါက လူသားများသည် ကျောက်စရစ်ခဲအမျိုးမျိုးကို ...
ဂျစ်ပစီ လူမျိုးများ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ဥရောပတိုက်တွင် အိုးအိမ်အတည်တကျမရှိဘဲ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်ပြု၍ လှည့်လည် သွားလာနေ ထိုင်သော လူမျိုးကို ဂျစ်ပစီဟု ခေါ်သည်။ ဂျစ်ပစီတို့ကို ရှေးအခါက အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌သာ တွေ့ရသည်။ ၁၃ဝဝ ပြည့်နှစ် လောက်က ဂျစ်ပစီတို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ...
Written By Htet Swe Oo Sayeret Matkal ဆိုသည် မှာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် စစ်ဦးစီး အထူး ကင်းထောက် ချေမှုန်းရေး တပ်ဖွဲ့ဟု အဓိပ္ပါယ်ရ ပါသည်။ အစ္စရေး ကာကွယ်ရေး ...
ဂရိလူမျိုးတို့ ကိုးကွယ်သည့်နတ်များ နတ်ကိုးကွယ်မှုသည် သိပ္ပံပညာ မထွန်းကားမီ ကမ္ဘာဦး ခေတ်မှ စ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ကျူးပစ်၊ ဗီးနပ် စသည်တို့မှာ ကမ္ဘာ နှင့်အဝန်း လူသိများသည်။ ရောမ အမည်မှည့်ထားလင့်ကစား စင်စစ်မှာမူ ဂရိနတ်များ ဖြစ်သည်။ ...
Written By ကြယ်နီ အမေရိကန် အမှတ်၂၆ ၊ ယန်းကီး တပ်မ အမှတ် ၁၀၂ တပ်ရင်းကြီး က တပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ပထမ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း က ပြင်သစ် ...
Page 52 of 58 Prev 1 … 51 52 53 … 58 Next